चीन सक्शन शावर हेड होल्डर, समायोज्य स्नान हेड होल्डर, वाल माउन्ट स्नान स्नान मिक्सर निर्माता र आपूर्तिकर्ता
विवरण:सक्सन शावर हेड होल्डर,समायोज्य स्नान प्रमुख धारक,वाल माउन्ट स्नान स्नान मिक्सर,सक्सन कप स्नान प्रमुख धारक,,
 Homeउत्पादनहरूनुहाउने नलभित्ता माउन्ट शावर सेट्स
भित्ता माउन्ट शावर सेट्स (Total 51 Products)
भित्ता माउन्ट शावर सेट्स को उत्पाद कोटिहरु, हामी चीन, सक्सन शावर हेड होल्डर , समायोज्य स्नान प्रमुख धारक आपूर्तिकर्ताओं / कारखाना, वाल माउन्ट स्नान स्नान मिक्सर आर एन्ड डी को थोक उच्च गुणवत्ता वाला उत्पादनहरु र विनिर्माण देखि विशेषज्ञता प्राप्त गर्दै छन्, हामी एकदम सही पछि बिक्री सेवा र प्रौद्योगिकी समर्थन छ। तपाईंको सहयोगको लागि अगाडि हेर्नुहोस्!
टब टाउको बिना नयाँ राउन्ड पर्दाफास शावर प्रणाली
वर्ग हेड टब नलको साथ शावर प्रणाली उजागर
गोल शैली टब नलको साथ शावर प्रणाली उजागर गरियो
मिक्सर वर्षा वर्षा हेड डायवर्टर प्रणाली3कार्यहरू
तातो र चिसो मिक्सर वर्षा वर्षा हेड डायभर्टर प्रणाली
तातो चिसो मिक्सर वर्षा वर्षा हेड डायभर्टर प्रणाली
भित्ता माउन्ट गरिएको छुपाएको शावर सेटमा
२-समारोह थर्मोस्टेटिक नुहाउने ट्याप स्तम्भ सेट
तातो बेच्ने काँसाको वर्षा स्नान सेट सुन कम्बो
टब नलको साथ नयाँ राउन्ड पर्दाफास शावर प्रणाली
टब नलको साथ राउन्ड एक्सपोज्ड शावर प्रणाली
टब नलको साथ वाल माउन्ट एक्सपोज्ड शावर प्रणाली
वाल माउन्ट एक्सपोजर्ड शावर प्रणाली
टब नलको साथ प्रस्फुटित शावर प्रणाली
टब नलको साथ आधुनिक बाह्य पाइप शावर प्रणाली
बाथरूममा त्यहाँ धेरै हार्डवेयर पार्टहरू छन् जुन स्थापना गर्नु आवश्यक छ, र नुहाउने नल एक महत्त्वपूर्ण स्नान हार्डवेयर सहायक हो, जसले नुहाउने अनुभवलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ। आरामदायी र टिकाऊ नहाउने नल हुनु र आराम र रमाईलो स्नान गर्नु दैनिक थकान कम...
नुहाउने नल सबै प्रकारका घर सजावटका लागि उपयुक्त छ। हाम्रो नुहाउने नल सरल र डिजाइनमा उदार छ, स्नान कोठा मिलान को सबै प्रकारको लागि उपयुक्त, बाथरूम को एक कुनामा कब्जा, सरल र फैशनेबल। यदि अपार्टमेन्ट ठूलो छ भने, तपाईं पानी ल्याउन दुई ह्यान्डलको नल छनौट...
यद्यपि शैलीहरूले धेरै परिवर्तन गर्दछ, हाम्रो स्नान नलसँग समान सरल र कडा आकार र स्थिर तापमान डिजाइन छ, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई स्केल्डिंगबाट रोक्न सक्छ र बाथरूमको वातावरण र शान्तता बढाउन सक्छ। चाहे नुहाउने नलको ह्यान्डल लचिलो छ कि नलको गुणवत्ताको...
नुहाउने नल त्यस्तो उत्पादन हो जुन प्रत्येक दिन प्रयोग गरिन्छ। यसले प्रभावकारी रूपमा पानी बचाउन सक्छ र पर्यावरण संरक्षण हासिल गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा जनताका लागि ठूलो चिन्ताको दिशा भएको छ। हाम्रो नुहाउने नलको अनौंठो बबलरले तपाईंलाई पानीको बचत...
नुहाउने नल एक महत्त्वपूर्ण सेनेटरी वेयर हो जुन पारिवारिक बाथरूम जीवनबाट अलग गर्न सकिँदैन। यसको प्रयोगले मानिसहरूलाई प्रत्येक दिन अमूल्य नुहाउने समयको आनन्द लिन मद्दत गर्दछ, जुन सुखी पारिवारिक जीवनको एक अपरिहार्य अंश हो। हाम्रो नुहाउने नलका केही...
हामी अनुकूलित आदेशहरू स्वीकार गर्दछौं । टब टाउकोको साथ यो प्लम्बिंग उजागरित स्नान प्रणाली सबै प्रकारको बाथरूमको लागि उपयुक्त छ। हामी तपाईंको प्राथमिकताका लागि विभिन्न प्रकारका किन्च faucets प्रदान गर्दछौं। पीतल शवर नल हामीले बनाएको5बर्षको...
हामी अनुकूलित आदेशहरू स्वीकार गर्दछौं । टब नलको साथ यो प्लम्बिंग एक्सपोजर शावर प्रणाली सबै प्रकारको बाथरूमको लागि उपयुक्त छ। हामी तपाईंको प्राथमिकताको लागि विभिन्न प्रकारका किन्च faucets प्रदान गर्दछौं। पीतल शवर नल हामीले बनाएको5बर्षको ग्यारेन्टी...
हामी अनुकूलित आदेशहरू स्वीकार गर्दछौं । यस गोल शैली वर्षा पानी नुहाउने टाउ नल संग न्यानो स्नान प्रणाली सबै प्रकारको बाथरूम को लागी उपयुक्त छ। हामी तपाईंको प्राथमिकताका लागि विभिन्न प्रकारका किन्च faucets प्रदान गर्दछौं। पीतल शवर नल हामीले बनाएको 5...
हामी अनुकूलित आदेशहरू स्वीकार गर्दछौं । यस गोल शैली टब नलको साथ शावर प्रणाली सबै प्रकारको बाथरूमको लागि उपयुक्त छ। हामी तपाईंको प्राथमिकताको लागि विभिन्न प्रकारका किन्च faucets प्रदान गर्दछौं। पीतल शवर नल हामीले बनाएको5बर्षको ग्यारेन्टी छ। हामीसँग...
हामी अनुकूलित आदेशहरू स्वीकार गर्दछौं । यो तातो बिक्री बेथ र नुहाउने नल सेट सबै प्रकारको बाथरूमको लागि उपयुक्त छ। हामी तपाईंको प्राथमिकताका लागि विभिन्न प्रकारका किन्च faucets प्रदान गर्दछौं। यो प्राचीन पीतल शवर नल हामीले बनाएको5बर्षको ग्यारेन्टी...
हामी अनुकूलित आदेशहरू स्वीकार गर्दछौं । यो तातो बिक्री क्रोम ब्रास स्नान नल सेट सबै प्रकारको बाथरूमको लागि उपयुक्त छ। हामी तपाईंको प्राथमिकताको लागि विभिन्न प्रकारका किन्च faucets प्रदान गर्दछौं। यो प्राचीन पीतल शवर नल हामीले बनाएको5बर्षको...
हामी अनुकूलित आदेशहरू स्वीकार गर्दछौं । यो तातो सेतो सेतो नुहाउने नल सेट सबै प्रकारको बाथरूमको लागि उपयुक्त छ। हामी तपाईंको प्राथमिकताका लागि विभिन्न प्रकारका किन्च faucets प्रदान गर्दछौं। यो प्राचीन पीतल शवर नल हामीले बनाएको5बर्षको ग्यारेन्टी छ।...
हामी अनुकूलित आदेशहरू स्वीकार गर्दछौं । यो तातो बेच्ने कालो नुहाउने नल सेट सबै प्रकारको बाथरूमको लागि उपयुक्त छ। हामी तपाईंको प्राथमिकताका लागि विभिन्न प्रकारका किन्च faucets प्रदान गर्दछौं। यो प्राचीन पीतल शवर नल हामीले बनाएको5बर्षको ग्यारेन्टी...
हामी अनुकूलित आदेशहरू स्वीकार गर्दछौं । यो तातो बिक्री क्रोम स्नान नल सेट सबै प्रकारको बाथरूमको लागि उपयुक्त छ। हामी तपाईंको प्राथमिकताका लागि विभिन्न प्रकारका किन्च faucets प्रदान गर्दछौं। यो प्राचीन पीतल शवर नल हामीले बनाएको5बर्षको ग्यारेन्टी छ।...
हामी अनुकूलित आदेशहरू स्वीकार गर्दछौं । यो तातो नुहाउने नल सेट सबै प्रकारको बाथरूमको लागि उपयुक्त छ। हामी तपाईंको प्राथमिकताका लागि विभिन्न प्रकारका किन्च faucets प्रदान गर्दछौं। यो प्राचीन पीतल शवर नल हामीले बनाएको5बर्षको ग्यारेन्टी छ। हामीसँग...
हामी अनुकूलित आदेशहरू स्वीकार गर्दछौं । टब नलको साथ यो नयाँ राउन्ड स्टाइल पर्दाफास शावर प्रणाली सबै प्रकारको बाथरूमको लागि उपयुक्त छ। हामी तपाईंको प्राथमिकताका लागि विभिन्न प्रकारका किन्च faucets प्रदान गर्दछौं। पीतल शवर नल हामीले बनाएको5बर्षको...
हामी अनुकूलित आदेशहरू स्वीकार गर्दछौं । टब नलको साथ यो राउन्ड एक्सपोज्ड शावर प्रणाली सबै प्रकारको बाथरूमको लागि उपयुक्त छ। हामी तपाईंको प्राथमिकताका लागि विभिन्न प्रकारका किन्च faucets प्रदान गर्दछौं। पीतल शवर नल हामीले बनाएको5बर्षको ग्यारेन्टी छ।...
हामी अनुकूलित आदेशहरू स्वीकार गर्दछौं । टब नलको साथ यो भित्ता माउन्ट खुला स्नान प्रणाली सबै प्रकारको बाथरूमको लागि उपयुक्त छ। हामी तपाईंको प्राथमिकताको लागि विभिन्न प्रकारका किन्च faucets प्रदान गर्दछौं। पीतल शवर नल हामीले बनाएको5बर्षको ग्यारेन्टी...
हामी अनुकूलित आदेशहरू स्वीकार गर्दछौं । यो पर्दाफास स्नान प्रणाली सबै प्रकारको बाथरूमको लागि उपयुक्त छ। हामी तपाईंको प्राथमिकताको लागि विभिन्न प्रकारका किन्च faucets प्रदान गर्दछौं। पीतल शवर नल हामीले बनाएको5बर्षको ग्यारेन्टी छ। हामीसँग नुहाउने नल...
हामी अनुकूलित आदेशहरू स्वीकार गर्दछौं । टब नलको साथ यो पर्दाफास शावर प्रणाली सबै प्रकारको बाथरूमको लागि उपयुक्त छ। हामी तपाईंको प्राथमिकताका लागि विभिन्न प्रकारका किन्च faucets प्रदान गर्दछौं। पीतल शवर नल हामीले बनाएको5बर्षको ग्यारेन्टी छ। हामीसँग...
हामी अनुकूलित आदेशहरू स्वीकार गर्दछौं । टब नलको साथ यो mdoern एक्स्ट्रानल एक्सपोज गरिएको पाइप स्नान प्रणाली सबै प्रकारको बाथरूमको लागि उपयुक्त छ। हामी तपाईंको प्राथमिकताका लागि विभिन्न प्रकारका किन्च faucets प्रदान गर्दछौं। पीतल शवर नल हामीले बनाएको...
चीन भित्ता माउन्ट शावर सेट्स आपूर्तिकर्ता
यहाँ तपाईं भित्ता माउन्ट शावर सेट्स मा सम्बन्धित उत्पादन पाउन सक्नुहुन्छ, हामी सक्सन शावर हेड होल्डर,समायोज्य स्नान प्रमुख धारक,वाल माउन्ट स्नान स्नान मिक्सर,सक्सन कप स्नान प्रमुख धारक,, को पेशेवर निर्माता हो। हामी अन्तर्राष्ट्रिय निर्यात उत्पादन विकास, उत्पादन र बिक्रीमा ध्यान केन्द्रित गर्दछौं। हामीले प्रत्येक निर्यात योग्य उत्पादन सुनिश्चित गर्न भित्ता माउन्ट शावर सेट्स को गुणस्तर नियन्त्रण प्रक्रिया सुधार गरेका छौं।
यदि तपाईं भित्ता माउन्ट शावर सेट्स मा उत्पादनहरूको बारे थप जान्न चाहानुहुन्छ, कृपया मापदण्डहरू, मोडेलहरू, चित्रहरू, मूल्यहरू र सक्सन शावर हेड होल्डर,समायोज्य स्नान प्रमुख धारक,वाल माउन्ट स्नान स्नान मिक्सर,सक्सन कप स्नान प्रमुख धारक,, को बारेमा अन्य जानकारी हेर्नका लागि उत्पाद विवरणहरू क्लिक गर्नुहोस्।
जुन तपाईं समूह वा व्यक्ति हुनुहुन्छ, हामी भित्ता माउन्ट शावर सेट्स को बारे मा सही र व्यापक सन्देश प्रदान गर्न को लागि हामी सबै भन्दा राम्रो गर्नेछौं!
सक्सन शावर हेड होल्डर समायोज्य स्नान प्रमुख धारक वाल माउन्ट स्नान स्नान मिक्सर सक्सन कप स्नान प्रमुख धारक वर्षा हेड शावर हेडहरू